Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaal laga ganay gujis - Bulsho News
Burcad afduubatay muwaadiniin Mareykan u badan oo dalbatay $17 milyan
Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Arbacada maanta ah xaqiijisay in taliska Pyongyang uu tijaabisay gantaal baalistik ah oo laga tuuray gujis, tallaabadaas oo ay khubarradu ku tilmaameen in Kuuriyada Waqooyi ay ka damacsan tahay in ay si dag dag ah u howlgeliso gujisyada xambaaro gantaallada.
Warka kasoo baxay Warbaahinta Xukuumadda Pyongyan ayaa yimid maalin kaddib marki ay Kuuriyada Koofureed sheegtay in ay rumeysantahay in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal laga tuuray gujis yaalla xeebaha bari ee Kuuriyada Waqooyi.
Dowladda Mareykanka ayaa ku boorrisay Kuuriyada Waqooyi in ay joojiso daan-daansiga.
Afhayeenka Aqalka Cad, Jen Psaki ayaa Talaadadi shalay sheegtay in Dowladda Mareykanka ay u furantahay in ay wadahadallo diblamaasiyadeed kala gasho Kuuriyada Waqooyi, barnaamijkeeda Niyukleerka.
Pyongyang ayaa arrintaasi horay ugu gacanseystay.
D/Hoose Ee Laascaanood Oo Shaacisay Dhisme Lagu Kordhinayo...
U.S. will move forward with reopening its Palestinian...
Gobolkii 3-aad oo ka mid ah Somaliland oo...
Hordhac: Chelsea Oo Isha Ku Haysa In Ay...
Doorashadii ka dhacday Puntland oo rajo gelisay haweenka